सीमाहरूको बावजुद, पुलिस बडी क्यामेरा अझै लोकप्रिय छन् OMG समाधानहरू
सीमाहरूको बावजुद, पुलिस बडी क्यामेरा अझै लोकप्रिय छन्
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूको फल्स हुन्छ, यो सबै राम्रो र उत्तम हुँदैन। यस पूर्वाधारको टुक्रामा केहि समस्याहरू छन् जसको सामना गर्नु पर्दछ र मुद्दाहरू खडा हुन्छन् जब यो दुरुपयोग वा गलत सर्तमा प्रयोग भएको खण्डमा देखा पर्दछ। हामी यी मध्ये केही सूचीबद्ध गर्दैछौं र आलोचकको रूपमा हेर्ने छौं यदि यसको फाइदाहरूको बाबजुद, यी झरनाहरू बेवास्ता गर्न सकिन्छ? र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसले ल्याउँछ?
पैसा र भण्डारण मुद्दाहरू
जब हामी यो प्रक्रिया चलाउने नोक्सानलाई सन्दर्भित गर्न चाहन्छौं, दुई बोल्ड समस्याहरू दिमागमा आउँछन् पैसा र ठाउँ। त्यहाँ यी भिडियोहरू कसरी र कहाँ भण्डारण गर्ने जहिले पनि समस्या छ, सुरक्षा एजेन्टहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिने भनेर पनि आवश्यक पर्दछ। तपाई हजारौं डलरको लागि क्यामेरा किन्न सक्नुहुनेछ, यो घटना समस्या होइन तर अभिलेखमा भण्डारण, क्रमबद्ध, र उचित प्रबन्धको लागि आवश्यक पर्दा भिडियोको लागि सजीलो पुग्नको लागि आवश्यक पर्दछ। यो धेरै केसहरूमा ठूलो समस्या बन्छ। यद्यपि पुलिस अधिकारीहरू भन्छन् कि उनीहरू अधिक पैसा आरक्षित गर्न सक्षम छन् जुन अन्यथा फौजदारी मुद्दामा खर्च गरिएको थियो, डाटा डाटाको यी ठूला मात्रा भण्डारण गर्न अर्को ठूलो चुनौती भयो।
हालको स्तरमा जुन शरीर क्यामेरा विकसित गरिएको छ, क्यामेरा अझै सम्म आँखा ट्र्याकर छैन जस्तो कि हामी FSI मा देख्छौं। एफएसआई टेक्नोलोजीको एउटा अंश हो जुन आँखाले हेरिरहेको ठाउँमा पछ्याउन सक्छ र लक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न ब्लिप प्रयोग गर्दछ। यसले माइक्रोसेकेन्डमा आँखाको साथ गति परिवर्तन गर्न सक्दछ। शरीर क्यामेरा यस्तो बनाइएको छ कि; तपाईं कुनै विशेष ठाउँमा हेर्दै हुनुहुन्छ र अझै त्यस क्षेत्रमा कार्य भइरहेको कार्य क्याप्चर गर्नुहुन्न, यो क्यामेरामा तपाईको अगाडि हुने सही कार्य नदेख्न प्रत्येक सम्भव छ।
क्यामेरालाई आँखासँग अलि बढी तुलना गर्ने क्रममा क्यामेरालाई पहिरनबाट भइरहेको शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघातको साथ पहिचान गर्न र कार्य गर्न असम्भव छ। यसले खास परिस्थितिमा यति समायोजन गर्दैन। आँखा अनावश्यक अस्तित्व छविहरू फिल्टर गर्न को लागी क्षमता छ वा कुनै व्यक्ति विशेष परिस्थितिमा द्रुत रूपमा बाहिर निस्कन आवश्यक छ भने वरिपरि हुने घटनाहरू। मानव आँखा शरीर-लगाउने क्यामेरा तुलना गर्दा यो धेरै पछाडि पछाडि, जब तपाईं एक खतराको अधीनमा हुन सक्छ, तपाईंको मस्तिष्कले खतरा देखाउँदछ नजिक र नजीक आउँदैछ तपाईंलाई सार्न र तपाईंलाई विशेष क्षेत्रबाट स्थान परिवर्तन गर्न। यो घटनालाई "लूमिंग" भनेर चिनिन्छ जुन शरीरमा लगाउने क्यामेराको एक सीमा हो, यसले केवल प्रक्रिया बिना नै के लिईरहेको छ र के हुँदैछ भन्ने सम्बन्धमा क्षमता राख्छ। यी कारकहरू हुन् जसले फुटेजको समीक्षालाई पछि व्यक्ति बनाउन पनि सक्छ, कुनै खास घटनासँग सम्बन्धित हुन कठिनाईको अनुभव हुन सक्छ। यो, तथापि, शरीर-लगाउने क्यामेरा को एक प्रमुख झटका लाग्छ।
महत्त्वपूर्ण खतरनाक परिस्थिति रेकर्ड गरिएको छैन
त्यहाँ महत्वपूर्ण चालहरू छन्, "स्पर्श संकेत" भनिन्छ जुन क्यामेरामा समात्न सकिदैन। मानौं एक अफिसरले एक संदिग्धलाई पक्रनेवाला छ, तर संदिग्ध व्यक्तिले आफ्नो मांसपेशिको प्रयोग गरेर प्रतिरोध गर्न खोजेको छ। यो यस्तो चीज हो जुन क्यामेरामा समात्न सकिदैन तर जब यस्तो अवस्था आउँछ। अफिसरलाई पक्राउ गर्न प्राय: थप बल प्रयोग गर्न बाध्य पारिन्छ। जब यस्तै भिडियोहरू पछि हेरिन्छ, यो जहिले पनि देखाइन्छ मानौं कि अफिसरले एक संदिग्धलाई सम्हाल्न अनावश्यक बल प्रयोग गर्‍यो। यो धेरै भ्रमपूर्ण छ किनकि यो शरीर-लगाउने क्यामेराको लागि कमी देखिएको छ, यसले अनुसन्धानमा ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
अर्को समस्या जुन बुझ्न सकिन्छ त्यो तथ्य यो हो कि; सम्झना क्यामेरामा देखा पर्दैन। अफिसरहरू भनेको केसहरूसँग व्यवहार गर्ने अनुभवहरू हुनु हो, एक नागरिकले आगमन अवस्था देख्न सक्नेछ जब कि अफिसरले केही आसन्न खतरा र कार्य देख्न सक्दछन्। यी सम्झनाहरु वा अनुभवहरु क्यामेरा मा देखाउँदैन, यो सजिलै लाग्नेछ जस्तो कि अफसरले कुनै कारण बिना नै अभिनय गरेको छ। हामी कुनै परिदृश्यको बारेमा सोच्न सक्दछौं जहाँ कुनै श a्काले आफ्नो हात विशेष प्रकारले माथि उठाउँदछ, एक नागरिकलाई यो सामान्य चाल मात्र हो वा आत्मसमर्पणको कार्य हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर धेरै अनुभव भएको कानूनको अफिसरको रूपमा र प्रशिक्षण। तपाईं तुरून्त भूतपूर्वको दृश्यहरू सम्झनुहुन्छ वा ट्रेनिंग सम्झना गर्दछ र त्यस अनुरूप कार्य गर्दछ।
रेकर्डि speed गति जसमा शरीरले लगाएको क्यामेरा रेकर्ड गर्दछ, धेरै फरक छ र स्टोर वा सुविधामा नियमित सीसीटीभी क्यामेरा भन्दा धेरै छिटो। यस रेकर्ड गतिको नतिजाको रूपमा, केहि घटनाहरू यति चाँडो घट्न सक्दछन् कि यो भित्र-भित्र फ्रेमहरूमा हराउन सक्छ। यस जस्तो मुद्दाहरूले चाकू वा थूलीको फ्ल्यास बनाउन सक्दछ, जुन अन्वेषणात्मक मामिलामा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ यो रेकर्ड गतिमा हराउन सक्छ। अर्को हराएको कारक शरीरको कार्य र प्रतिक्रिया समय हो। त्यसोभए कुनै अफिसरले शुटि or गर्दैछ वा शूटिंग रोकिरहेको छ, कार्य र प्रतिक्रिया देख्न सकिन्छ र गलत व्याख्या गर्न सकिन्छ यसैले समस्याहरू निम्त्याउँदै।
कम प्रकाश परिदृश्यमा राम्रोसँग हेर्नको लागि क्यामेराको क्षमता
त्यहाँ समयहरू रेकर्डिंग फुटेज खेल्ने क्रममा छ, कम प्रकाश क्षेत्रमा अवलोकन गर्नेहरूलाई धेरै दृश्यात्मक हुन्छ, तिनीहरू बुझ्न वा अवलोकन गर्न असमर्थ छन् जो एक व्यक्तिले मात्र देख्न सक्छ जुन परिस्थितिमा अवश्य देख्न सकिन्छ विचार गर्न सकिदैन। एक अफिसरले एक सुरंगमा तल एक संदिग्ध व्यक्तिलाई ढिलो बाहिर आउन अपील गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्छ, उसले आउने निर्णय गर्न सक्छ र सायद सेलफोन वा हातमा हात राखेको हुन सक्छ। अफिसरलाई श suspect्का लाग्न सक्छ वा चीज यो बन्दुक हो र गोली हान्न आक्रोशित हुन सक्छ। यी परिदृश्यहरू हुन् जसले भिडियो विश्लेषण एकदम जटिल बनाउन सक्छ। यो पनि देखिएको छ कि क्यामेरा सँधै प्रकाशको साथ पनि भरपर्दो हुन सक्दैन, तिनीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण विवरण फारम फोकस हटाउँदै सेकेन्डमा उज्यालो देखि मधुरो हुन जान सक्दछन्।
केहि अन्य सीमाहरू हुन्:
दोस्रो अनुमानलाई प्रोत्साहित गर्दा जब कुनै दृश्य राम्रोसँग हेर्न वा बुझ्न नसकिने हुन्छ, प्राय जसो केसाहरू ती वास्तविक परिस्थितिबाट टाढा हुन सक्दछन्।
एकल क्यामेराको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ
क्यामेराले २-आयाम मात्र रेकर्ड गर्न सक्छ
कहिलेकाँही तपाइँको शरीर महत्वपूर्ण दृश्य ब्लक हुन सक्छ
सीमाहरूको बावजुद, पुलिस बडी क्यामेरा अझै लोकप्रिय छन् पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: अक्टोबर 10th, 2019 by व्यवस्थापक
2853 कुल दृश्यहरू4हेराइ आज
पुलिस शरीर लगाएका क्यामेराको सीमितता
सुरक्षा कम्पनी - कसरी प्रभाव छ पुलिस शरीर लगाएका क्यामेरा
अनुहार पहिचान पुलिस बॉडीमा लगाएका क्यामेराहरूमा आउँदैछ
सिंगापुर शीर्ष 500 उद्यम 2018 र 2019
↳ BWC065 - हेलमेट क्यामेरा 4G WIFI क्यामेरा हेड सेफ्टी क्यामेरा
↳ BWC058-4G - OMG मिनी शरीर बर्न क्यामेरा अनुहार मान्यता (WIFI / GPS / 3G / 4G) को साथ
↳ BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G शरीर धारित क्यामेरा (तातो स्व्याप ब्याट्री)
↳ BWC009 - WIFI / 4G / GPS हेडलाइट हेलमेट क्यामेरा
सहायक उपकरण - बडीयो क्यामेरा
↳ BWA015 - हेलमेट शारीरिक शरीरमा क्यामेरा धारक
↳ BWA008-TS - शरीर क्याम ट्रिपोड स्टैंड
↳ BWA005-MP - शरीर क्याम चुंबक पिन
↳ BWA006-RSH - शारीरिक क्याम परावर्तनशील काँध पट्टा दोहन
↳ BWA012 - बडी क्यामेरा Vest
↳ BWC010-LC - शारीरिक क्यामेरा लक क्लिप
↳ BWA000-SH - OMG शरीर क्याम शोल्डर दोहन
↳ BWA003 - छाला काँध क्लिप माउंट स्ट्र्याप
↳ श्रमिकहरू द्वारा शारीरिक-श्रृंगार गरिएको क्यामेराको आपत्ति मान्यता
↳ शारीरिक धारणा क्यामेरामा सार्वजनिक विश्वास
↳ पुलिस अफिसरहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेराको डाउनसाइडहरू
↳ शरीरमा लगाएको क्यामेरा अन्तिम बिन्दु हुन सक्दैन
↳ शारीरिक-लगाएको क्यामेरा प्रयोग गरेर पुलिस अधिकारीहरूको कमजोरीहरू
↳ शरीरमा लगाएको क्यामेरा फुटेज कारण चीजहरू खाली हुन सक्दैन
↳ शरीरमा लगाएको क्यामेरा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा प्रयोगको लागि राखियो
↳ सुरक्षा निकाय र गोपनीयता मा प्रहरी निकाय क्यामेरा क्यामेरा मा चासो उठाउँदै
↳ शरीरमा परिणत क्यामेरा सबै परिस्थितिहरू समाधान गर्न सक्दैन
↳ सुरक्षा चिन्ता र गोपनीयता रेजि्रेजि Police पुलिस बडी कपडा क्यामेरा बढाउँदै
↳ किन बडी क्याम फुटेज हुन सक्छ चीज खाली छैन
↳ शारीरिक देखभाल सुविधाहरूमा शरीर लगाएको क्यामेरा प्रयोग
↳ पुलिस निकायले लगाएको क्यामेरा सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ताहरू बढाउँछन्
↳ कसरी पुलिस अफिसरहरू बॉडी लगाएको क्यामेराले एशियामा गोपनीयतालाई असर गर्छ
↳ कर्मचारीहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेरा उपयोगको बारेमा चिन्ता गर्छन्
↳ सीमाहरूको बावजुद, पुलिस बडी क्यामेरा अझै लोकप्रिय छन्
↳ BWC094 - किफायती मिनी बॉडी बर्न क्यामेरा (हटाउन योग्य SD कार्ड)
↳ BWC089 - १ Long लामो घण्टा लाइटवेट पुलिस बडी क्यामेरा (चौडा कोण 16००-डिग्री)
↳ BWC090 - लाइट वेट पुलिस शरीर सुरक्षा कवच को लागी लगाएको क्यामेरा (चौडा कोण 170० 12-डिग्री १२ कार्य घण्टा)
↳ BWC083 - लाइट वेट पुलिस बॉडी लगाइएको सुरक्षा गार्डहरूको लागि क्यामेरा (वाटरप्रूफ, वाइड एंगल १ 130० डिग्री, १२ वर्किंग एचआर, ०p० एचडी)
↳ BWC081 - अल्ट्रा मिनी वाईफ़ाई पुलिस बॉडी बर्न क्यामेरा (१ De० डिग्री + रात दृष्टि)
↳ BWC074 - मिनी हल्का तौल शरीरको लगाइएको सुपर भिडियो कम्प्रेसनको क्यामेरा - 20GB को लागि 25-32 घण्टा [कुनै LCD स्क्रिन छैन]
↳ BWC055 - हटाउन योग्य एसडी कार्ड मिनी शरीर बृद्धि क्यामेरा
↳ लाइट वजन वाईफाई कानून प्रवर्तन निकाय वेंक क्यामेरा, भिडियो 1728 * 1296 30 एफपीएस, एच। एक्सएनएक्स, 264NM Nightvision (BWC940)
↳ BWC010 - मिनी पुलिस शारीरिक Worn क्यामेरा, 1296p, 170Deg, 12 घण्टा, रात दृष्टि
↳ BWC003 - मिनी पुलिस शरीर लगायो क्यामेरा
↳ वाईफाई पोर्टेबल वार्मयोग्य सुरक्षा 12MP क्यामेरा, 1296P, एच। 264, एप नियन्त्रण (स्पाइक्सिनम)
↳ पहिरन हेडसेट शरीर पुर्ण क्यामेरा (BWC056)
↳ OMG 8 पोर्ट स्टेशन प्रदर्शन संग (BWC038)
↳ शीर्ष सिंगापुर पुलिस शरीरमा लगाएको क्यामेरा वितरक